Football Khabar » पिएसजीले किन घटायो नेइमारको मूल्य ?
पिएसजीले किन घटायो नेइमारको मूल्य ?
अनेक चर्चा र रस्साकस्सीबीच फ्रेन्च क्लब पिएसजीले आफ्ना ब्राजिलियन स्टार खेलाडी नेइमारको मूल्य घटाएर सरुवालाई थप सहज बनाएको छ । र, उसले नेइमार बेच्न ढोका खुला गरेको छ । यस्तो रिपोर्ट ‘डायरियो स्पोर्ट’ले छापेको छ ।
क्लबको बोर्डमा यदि नेइमार क्लब छाड्न चाहन्छन् भने उनलाई जबर्जस्ती राख्नु उचित नहुने मत बढेपछि अध्यक्ष नासिर अल खिलाफी नेइमार बेच्न तयार भएका हुन् । त्यसका लागि पिएसजीले नेइमारको मूल्यमा समेत भारी कटौती गरेको छ ।
यसअघि पिएसजीले नेइमारका लागि ३०० मिलियन युरो न्यूनतम् मूल्य तोकेको थियो । तर, पिएसजी अब बार्सिलोना वा अन्य जुनसुकै क्लबबाट पनि उनका लागि १८० मिलियन युरोभन्दा बढीको अफरमा छलफल गर्न तयार देखिएको छ ।
रिपोर्टअनुसार पिएसजीले तोकेको न्यूनतम् मूल्य आफूले खरिद गरेको भन्दा ३३ मिलियन कमी हो । उसले नेइमारलाई सन् २०१७ मा बार्सिलोनाबाट २२२ मिलियन युरोमा किनेको थियो ।
यसअघि पिएसजीले उचित मूल्यको अफर आए मात्रै नेइमार बेच्ने भन्दै उनको न्यूनतम् मूल्य ३०० मिलियन तोकेको थियो । तर, अहिले सरुवा बजारमा नेइमारको ‘घट्दो मार्केट भ्यालु’लाई ख्याल गर्दै ‘क्लबमा बस्न नचाहने’ खेलाडीलाई बिदा गर्न तयार भएको हो ।
तर, पिएसजीले नेइमारको मूल्य घटाएर नयाँ सर्त थपेको छ । त्यो हो– यदि कुनै क्लबले उनलाई किन्न प्रस्ताव गर्छ भने त्यहाँ खेलाडी मिसाउने डिल मान्य हुनेछैन । खेलाडी किन्ने क्लबले सबै नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेइमार हाल पिएसजीको प्रि–सिजन टोलीमा सामेल छन् । तर, उनलाई खेलाइएको छैन । प्रशिक्षक थोमस टचेलले नेइमार खेल्न फिट भए पनि प्राविधिक कारणले खेल्ने टोलीमा नराखेको बताउँदै आएका छन् । नेइमारको सम्भावित सरुवालाई मध्यनजर गर्दै उनले नेइमारलाई नखेलाएको बताइन्छ ।
यससँगै अब बार्सिलोनालाई नेइमार फर्काउन मूल्यका हिसाबले राहत मिल्ने भएको छ । तर, बार्सिलोनाले नेइमार फर्काउन आफ्ना खेलाडी दिएर केही रकम थप्ने योजना भने फेल हुने देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति १५ श्रावण २०७६, बुधबार ०९:१७
ग्रानाडासँग नमिठो हार भोग्दै बार्सिलोना कोपाको क्वार्टरफाइनलबाटै आउट